Nirefodrefotra ny basy teny Anosibe: jiolahy telo maty voatifitry ny Sag | NewsMada
Nirefodrefotra ny basy teny Anosibe: jiolahy telo maty voatifitry ny Sag
Teo am-pikononkononana fanafihana mitam-piadiana, tetsy akaikin’ny Solimotel Anosibe indrindra, omaly tolanandro, ity andian-jiolahy iray no nitontonan’ny polisin’ny Sag. Velona ny fifampitifirana ka lavo nandritra izany ny telo tamin’izy ireo, raha tafaporitsaka ny iray hafa.
Nirefodrefotra indray ny poa-basy teny Anosibe, omaly hariva tamin’ny 6 ora sy 30 mn. Toy ireny amin’ny horonantsarimihetsika ireny ny zava-nitranga, raha ny loharanom-baovao voaray. Jiolahy telo indray lavon’ny polisy avy ao amin’ny Service Central Anti-Gang na Sag. Vehivavy iray azo sambo-belona. Jiolahy iray hafa tafaporitsaka. Araka ny fanazavan’ny polisy andian-jiolahy nikononkonona fanafihana mitam-piadiana teny amin’iny faritra manodidina an’Anosibe iny ry zalahy ireto. Nahazo loharanom-baovao mialoha ny fisian’ireto jiolahy raindahiny miaraka amin’ny fitaovam-piadiana mahery vaika ireto. Nanomboka teny Anosy ny fanarahan-dia nataon’ny polisy ireto jiolahy ireto. Nandeha fiara “Trafic” ireto jiolahy ireto tamin’io fotoana io, raha ny tatitra avy amin’ny polisy hatrany. Tsikaritr’ireo jiolahy anefa fa hoe narahan’ny polisy izy ireo ka tsy nihambahamba nitifitra tamin’ny basy Kalachnikov ry zalahy teo akaikin’ny Solimotel.
Rotidrotiky ny bala ireo jiolahy…
Raikitra ny fifampitifirana ary nahery vaika mihitsy satria tsy nanaiky nilavo lefona ireto jiolahy ireto. Nifamaliana ny tifitra teo amin’ny polisy sy ireo jiolahy. Niaro tena ny polisy ka niafara tamin’ny fahafatesan’ireo jiolahy. Tratra tany amin’ireo jiolahy ny Basy Kalachnikov iray sy basy PM iray miaraka tamin’ny cartcouche. Mitohy kosa ny fikarohan’ny polisy ireo jiolahy tafaporitsaka. Mendri-piderana, araka izany, ny ezaka vitan’ny polisim-pirenena manoloana ny fahalavoana andian-jiolahy miaraka amin’ny fitaovam-piadiana mahery vaika toy izao. Naterin’ny polisy eny amin’ny tranom-patin’ny HJRA ny fatin’ireo jiolahy.